सामाजिक मिडिया पोष्टहरूको उचित तालिकाका लागि उत्तम अभ्यासहरू Martech Zone
सामाजिक मिडिया पोष्टहरूको उचित तालिकाका लागि उत्तम अभ्यासहरू
मंगलवार, मे 15, 2018 बिहीबार, फेब्रुअरी 25, 2021 Nate Gadzhibalaev
तपाइँको सामाजिक मिडिया पोष्टिको समय तालिका तपाइँको सामाजिक मिडिया मार्केटिंग रणनीतिको एक महत्त्वपूर्ण अंश हुनुपर्दछ, र यो भन्नु अनावश्यक छ कि यसका धेरै फाइदाहरू छन्। दिनमा धेरै चोटि धेरै सामाजिक मिडिया प्लेटफर्महरूमा पोष्टिंगको बारेमा सोच्नु पर्ने बाहेक, तपाईं पनी एक सुसंगत तालिका बनाउनुहुनेछ, समयको संवेदनशील सामग्री योजना गर्नुहोस्, र स्वस्थ साझा-अनुपात पनि हुनुहुनेछ किनकि तपाईं पहिल्यै योजना बनाउन सक्नुहुन्छ।
दैनिक आधारमा सबै समयमा सोशल मिडिया प्लेटफर्महरूमा हुनुको सट्टा, तालिकाबद्धले तपाईंलाई मूल्यवान समय बचत गर्दछ जुन तपाईं आफ्नो व्यापार बढाउनको लागि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईंलाई कहाँ सुरु गर्ने थाहा छैन भने हामी तपाईंलाई तपाईंको सोशल मिडिया पोष्टहरूको सही तालिकाका लागि उत्तम अभ्यासहरू दिनेछौं।
परफेक्ट टाइम्समा पोष्ट गर्नुहोस्
बिभिन्न सोशल मिडिया प्लेटफर्महरूमा परिवर्तनशील एल्गोरिदमको कारणले गर्दा, तपाईंको सोशल मिडिया खाताहरूमा सही समयमा पोष्टिंग आवश्यक छ यदि तपाईं आफ्नो पोस्टहरू सकेसम्म धेरै व्यक्तिहरू द्वारा ध्यान दिन चाहनुहुन्छ भने। दैनिक आधारमा सामाजिक मिडिया प्रयोगकर्ताहरूको संख्या बढ्दै जाँदा, सामाजिक मिडिया प्लेटफार्मको समाचार फिडहरू कहिल्यै छिटो सरेका छैनन्।
अन्तर्दृष्टि र एनालिटिक्स एक समय हो तपाईमा कुन समय सबैभन्दा राम्रो हुन्छ भनेर पत्ता लगाउन। साधारण रूपमा हेर्नुहोस् जब तपाईंको दर्शकहरू सबैभन्दा सक्रिय अनलाइन छन् र ती समयमा पोष्ट हुन्छ। त्यो भनिएको छ, यदि तपाईं अझै सटीक अन्तर्दृष्टि प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईं एक सामाजिक मिडिया अनुसूची उपकरण प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यस प्रकारका उपकरणहरूले प्रत्येक पटक तपाईंलाई उत्तम पोस्टि times्ग समय दिन्छ किनकि उनीहरूले उत्तम समय निर्धारण गर्न एल्गोरिथ्म प्रयोग गर्छन्।
एक भन्दा बढि सामाजिक मिडिया खाता प्रबन्ध गर्न जारी राख्न संघर्ष गर्दै? यस विस्तृत मार्गदर्शक जाँच गर्नुहोस् कसरी धेरै सामाजिक मिडिया खाताहरू प्रबन्ध गर्ने र हेर्नुहोस् के राम्रो अभ्यासहरू के हुन्।
तपाईको पोष्टिंग फ्रिक्वेन्सी अनुकूलन गर्नुहोस् - कति पटक पोष्ट गर्ने जान्नुहोस्
"म मेरो फेसबुक / ट्विटर / इन्स्टाग्राम खातामा कति पटक पोष्ट गर्ने?" प्राय: सोधिने प्रश्नहरू मध्ये यो एक हो जब यो सोशल मीडिया सामग्री रणनीतिको कुरा आउँदछ। दुर्भाग्यवस, त्यहाँ कुनै सुनौलो नम्बर छैन जुन कुनै पनि सामाजिक मिडिया प्लेटफर्ममा लागू हुन्छ। जे भए पनि, प्रत्येक प्लेटफर्मले फरक ढ .्गले काम गर्दछ, तर प्रत्येक दर्शक पनि फरक हुन्छ, त्यसैले उनीहरूसँग बिभिन्न आवश्यकताहरू र अपेक्षाहरू हुन्छन्।
एउटा कुरा निश्चितको लागि हो - प्राय: पोष्टिंग गर्नाले तपाईंको पहुँच बढाउँदैन वा तपाईंको श्रोताको चाँडो बढ्दैन। यसको विपरित, तपाईंको खाता स्पामीको रूपमा आउन सक्छ, त्यसैले तपाईं वास्तवमा सम्भावित अनुयायीहरू गुमाउन सक्नुहुन्छ।
प्रत्येक सामाजिक मिडिया प्लेटफर्ममा तपाईले कति पटक पोष्ट गर्नुपर्नेछ भनेर पत्ता लगाउने एउटा तरिका प्रयोग मार्फत हो। सोमबार, मानौं कि तपाई एक पोष्ट पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि मंगलबारमा दुई पोष्टहरूमा संख्या बढाउनुहोस्, बुधवारमा तीन गर्न, र यस्तै। अर्को हप्ता तपाईको अन्तर्दृष्टि वा एनालिटिक्स जाँच गर्नुहोस् र तुलना गर्नुहोस्।
सही संख्या के हो भनेर पत्ता लगाउन त्यहाँ धेरै सजिलो तरीका छ, र त्यो सोशल मिडिया शेड्यूलिंग उपकरण मार्फत पनि गर्न सकिन्छ। यो भनिएको छ, आउनुहोस् हामी तपाईंलाई केहि सिफारिशहरू दिन्छौं जब यो तपाईंको पोस्टि frequency आवृत्ति आउँछ।
फेसबुक, दिनको १ - २ पटक।
ट्विटर, - - ++ प्रति दिन पटक।
इन्स्टाग्राम, प्रति दिन १ - २ पटक।
लिंक्डइन, प्रति दिन २ पटक।
Pinterest - ++ दिन प्रति दिन।
Google+, प्रति दिन १- 1 पटक।
सदाबहार पोष्टहरूका लागि पोष्टिंग अनुसूची सेट अप गर्नुहोस्
सामाजिक मिडियामा निरन्तर उपस्थित हुनु कुनै सजिलो उपलब्धि होइन; सबै पछि, तपाइँले निरन्तर विभिन्न प्लेटफर्महरूमा तपाइँको अनुयायीहरूलाई सामग्री प्रदान गर्नुपर्दछ। यद्यपि यसको मतलब यो होइन कि प्रत्येक पोष्ट एक पटक मात्र प्रकाशित गर्नुपर्दछ। यसको विपरित, केहि पोष्टहरू लामो समय अवधिमा प्रासंगिक रहन्छन् जबकि सँधै तपाईंको श्रोताको लागि रुचि हुन्छ। सदाबहार सामग्री पुन: पोस्ट गर्नु तपाईंको श्रोतालाई तपाईंको सामग्री मार्केटि strategy रणनीतिलाई मूल्य दिँदा उनीहरूलाई के चाहिन्छ भन्ने एक उत्तम तरिका हो। त्यसोभए, तपाइँ कसरी जान्नुहुन्छ कि सँधै कुन पोष्टहरू सदाबहार हुन्छन् र तपाइँ तिनीहरूलाई कत्ति पटक पोष्ट गर्नुहोस्?
सदाबहार पोष्ट ती पोस्टहरू मानिन्छ जुन समयको संवेदनशील हुँदैन र लामो अवधिमा मूल्य प्रदान गर्दछ। तपाइँको कुन पोष्ट सदाबहार हो भनेर फेला पार्ने एउटा तरिका भनेको सामग्री र मनपर्ने र टिप्पणीहरूको संख्याको आधारमा तपाइँको फिडमा मैन्युअल रूपमा खोजी गर्नु हो। तब सबै भन्दा राम्रो पोस्टि each समयहरूको लागि खोजी गर्दा मैन्युअल रूपमा प्रत्येक र प्रत्येकको तालिका बनाउनुहोस्।
अर्को तरिका यो हो कि तपाईले अनुमान लगाउनुभएको छ, एक तालिका उपकरण प्रयोग गरेर। यी मध्ये केही उपकरणहरूले तपाईंलाई ती पोष्टहरू फेला पार्न मद्दत गर्दछ जुनसँग अधिक मनपर्दो, टिप्पणीहरू, र सेयरहरू छन्, तर तिनीहरूलाई बहु सोशल मिडिया खाताहरूमा सही पोस्टि times समयमा पनि अनुसूची गर्दछ।
सामाजिक मीडिया तालिका उपकरण प्रयोग गर्नुहोस्
जब हामीले सही समयमा पोष्टिंगको बारेमा कुरा गर्‍यौं, तपाईंको पोष्टिंग फ्रिक्वेन्सी अनुकूलित गर्दै, साथै तपाईंको सदाबहार सामग्रीको तालिका बनाउँथ्यौं, हामीले उल्लेख गर्‍यौं कि सोशल मिडिया अनुसूची उपकरणहरूको प्रयोग गरेर तपाईं केवल बढी कुशल हुनुहुनेछैन, तर तपाईंले बहुमूल्य समय पनि बचत गर्नुहुनेछ। त्यहाँ छनौट गर्न को लागी धेरै बिभिन्न सामाजिक मिडिया शेड्यूलिंग उपकरणहरू छन्, जे होस्, प्रायः उही दुई सुविधाहरू छन्। पहिलो हो, स्पष्ट रूपमा तपाईको पोष्टको तालिका मात्र एकमा होइन तर बहुविध सामाजिक मिडिया खाताहरूमा। दोस्रो एउटा अत्यावश्यक एनालिटिक्स हो जुन तपाइँलाई तपाइँको दर्शकहरू चिन्न र तपाइँको सामग्री रणनीति सुधार गर्न सक्दछ।
यस दिन र उमेर मा, लगभग कुनै आधुनिक व्यापार कम्तिमा एक मा उपस्थित हुन बिना सञ्चालन गर्न सक्दैन, यदि अधिक सामाजिक मिडिया प्लेटफर्म होईन भने। यसै कारण सेड्युलिंग एकदम महत्त्वपूर्ण छ यदि तपाईंसँग आफ्नो व्यापार बढाउनको लागि अन्य चीजहरू गर्न समय चाहानुहुन्छ तपाईको फोनमा सँधै पोष्टिंगमा रहनु हुँदैन। तसर्थ, एक तालिका उपकरण जस्तै छान्नुहोस् एम्प्लिफर र हेर्नुहोस् तपाईंको जीवन कसरी यति सजिलो हुन्छ तपाईंको व्यवसाय बढ्दै जाँदा!
एम्प्लिफरको लागि साइन अप गर्नुहोस्
टैग: एम्प्लीफरउत्तम समयसदाबहार पोष्टहरूपोष्टिंग फ्रिक्वेन्सीनिर्धारित पोष्टहरूसामाजिक मिडिया आवृत्तिसामाजिक मिडिया तालिका
Nate को संस्थापक हो एम्प्लिफर, एक सेवा जसले व्यक्ति र व्यवसायलाई मद्दत गर्दछ स्वचालित रूपमा उनीहरूको सामाजिक मिडिया पोष्टहरूको शेड्युल गरेर, तिनीहरूलाई बढी पैसा कमाउन मद्दत गर्दछ। उत्पादन प्रबन्धन, ब्यापार विकास, र अन्तर्राष्ट्रिय बृद्धिमा पृष्ठभूमिको साथ, व्यक्ति र व्यवसायलाई उनीहरूको श्रोताको लाभ कसरी र प्रभावकारी ढ grow्गले बढाउन सक्छ भनेर देखाउँदै उनीहरूलाई मद्दत गर्ने लक्ष्य राख्दछ।
खुसी आमाको दिन!